8-Bruno Fernandes-Sporting Lisbon
Xidiga xili ciyaareedkii dhamaaday layaabka ka soo sameeyay horyaalka Portugal ee Bruno Fernandes ayaa ka mid noqday ciyaartoyda xagaagan loogu doonista badan yahay waxaana lala xidhiidhinayaa kooxaha Man United, Man City iyo Liverpool.
Wargayska The Sun iyo ilwareedyo kale ayaa shaaciyay in haddaba ay Man United heshiis la gaadhay Bruno Fernandes laakiin inta aan heshiiskiisa la dhamaystirin wali waxa uu u ufuran yahay in uu doorasho kale ku samayn karo kooxaha Liverpool iyo Man city.
Bruno Fernandes waxa uu xili ciyaareedka dhamaaday ka soo qayb qaatay 50 gool oo ay kooxdiisa Sporting Lisbon tartamada oo dhan ka soo dhalisay waana 32 gool oo uu soo dhaliyay iyo 18 gool caawin uu sameeyay.
Waxa kale oo uu Bruno Fernandes door fiican ka ciyaaray finalkii UEFA Nations league ee uu xulkiisa portugal ku garaacay Holland isaga oo waliba shaxda Fernando Santos ku soo bilawday.
Kooxda Sporting ayaa 70 milyan yuro ku qiimaynaysa Bruno Fernandes waxayna hadda u muuqataa in ay noqon karto lacag u qalanta in laga bixiyo xidig saamaynta noocan oo kale soo yeeshay.
Qaab ciyaareedkii uu xili ciyaareedkan soo sameeyay xidiga kooxda Lille ee Nicolas Pepe waxa uu noqday mid kooxaha waa wayn ee Yurub si wayn looga dareemay taas oo keentay in ragga suuqa qiimeeyaa ay waqi badan ku qaadanayaan in ay xaaladiisa la socdaan.
Nicolas Pepe ayaa xiiso ka helaya horyaalada Yurub ugu waa wayn gaar ahaan Premier leauge laakiin kooxda Paris Saint-Germain ayaa doonaysa in ay Nicolas Pepe ku sii hayso horyaalka France oo ay Lille kala soo wareegto.
Kooxaha Liverpool, Arsenal, Man United iiyo kooxo badan oo kale ayaa xiisaynaya saxiixa Nicolas Pepe wuxuuna ka mid yahay ciyaratoyda loogu doonista badan yahay xagaagan.
Kooxaha Liverpool iyo Bayern Munich ayaa hadda u muuqda in ay yihiin labada kooxood ee iskugu soo hadhaya tartankii loogu jiray saxiixa Nicolas Pepe kaas oo ay suurtogal tahay in uu dhawaan go’aankiisa gaadhi doono.
6- Pual Pogba- Manchester United
Pual Pogba ayaa ka mid ah ciyaartoyda ugu magaca wayn ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda inta badan looga hadlayo waxayna sheekadiisa suuqa kala iibsigu u dhexaysaa kooxaha Real Madrid iyo Juventus halka Man United ay ku adkaysanayso in aanu iib ahayn.
Real Madrid ayaa wax walba u samaynaysa in ay Pual Pogba kooxdeeda keento kadib markii uu Zidane ku guulaystay taageerada boodhka kooxdiisa oo markii hore door bidayay xidiga kooxda Tottenham ee Christian Eriksen.
Laakiin Juventus ayaa hadda Real Madrid ku cidhiidhyaysa saxiixa Pual Pogba iyada oo waliba Man United u haysa dalabyo kala duwan oo ay ciyaartoy muhiim ahi Old Trafford ugu biiri karaan.
Inkasta oo Real madrid lafteedu ay ciyaartoy iyo lacagba ku awoodo saxiixa Pual Pogba, haddana xidhiidhka suuqa ee Madrid iyo Man United ayaa ah mid xun oo Juventus siin kara in ay gacanta sare yeelan karto.
Kooxda Juventus ayaa diyaar u ah in ay Pual Pogba dib ugu soo celiso Turin waxayna diyaar u yihiin in ay ilaa shan ciyaartoy kooxdooda ka diri karaan kuwaas oo ay waliba xidigo muhiim ahi ku jiraan.
Laakiin waxaa la sugayaa haddii Real Madrid ama Juventus midkood uu awoodi karo in ay Man United ku qancin karaan in Pogba uu Old Trafford ka baxo.
Si kastaba ha ahaatee, haddii ay Man United ogolaato in Pogba uu ka baxo kooxdeeda, waxa uu ka mid noqon doonaa ciyaartoyda saamaynta ugu badan suuqa kala iibsiga ku yeelan kara.